MelodyMon: June 2009
ငါအိုသွားသောအခါ - - -
ငါဟာ အရင်ကငါ မဟုတ်တော့ဘူး။ ငါ့ကိုနားလည်ပေးပါ။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားဆက်ဆံပေးပါ။
ချည့်နဲ့နဲ့လက်တွေနဲ့ ထမင်းဟင်းတွေ အင်္ကျီပေါ်ဖိတ်စင်သွားတဲ့အခါ . . .
အင်္ကျီ၊ လုံချည် ဖိုသီဖတ်သီဖြစ်နေတဲ့အခါ . . . ငါ့ကိုမရွံပါနဲ့။
အပ်ကြောင်းထပ်မက ပြောဖူးတဲ့စကားတွေ ပြန်ပြောမိတဲ့အခါ စကားမဖြတ်ဘဲ ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပေးပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ရာဝင်တိုင်း တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေ၊ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော်တွေ၊ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေ စတဲ့ ပုံပြင်တွေကို မရိုးအောင်ပြောရင်း ငါချော့သိပ်ခဲ့တာတွေကို သတိရပေးပါ။
မလှုပ်ရှားနိုင်လို့ ရေချိုးဖို့ အကူအညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကိုမငြိုငြင်ပါနဲ့။
ငယ်ငယ်တုန်းက ချော့တစ်လှည့်၊ ခြောက်တစ်လှည့် ရေချိုးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မြင်ယောင်ပေးပါ။
ခေတ်သစ်နည်းပညာသစ်တွေကို မသိနားမလည်ခဲ့ရင် မလှောင်ပါနဲ့။
ငယ်ငယ်တုန်းက ” ဘာကြောင့်လဲ ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို စိတ်ရှည်စွာ ငါပြန်ဖြေခဲ့တာကို သတိရပေးပါ။
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါ၊ နွမ်းလျပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါ၊ ခွန်အားပါတဲ့လက်တစ်စုံနဲ့ ငါ့ကိုကူတွဲပေးကြပါ။ လမ်းလျှောက်သင်စအရွယ်တုန်းက တစ်လှမ်းချင်း လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာတွေကို သတိရပေးပါ။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းမနည်းပါနဲ့။
နားလည်ပေးပါ။ အားပေးပါ။ အရင်တုန်းက လူ့ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ငါလမ်းညွှန်ခဲ့သလို၊ အခုချိန်မှာ ငါ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် အဖော်ပြုပေးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ အေးမြမှုတွေကို ငါပြုံးပြုံးလေး လက်ခံမှာပါ။ အဲဒိအပြုံးတွေထဲမှာ မဆုံးတဲ့ ငါ့မေတ္တာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
သားသမီးတို့ရေ . . . ထာဝရ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်။
Posted by MelodyMon at 4:47 PM No comments:
အန်အိတ်ခ်ျကေ ရေဒီယိုဂျပန် မြန်မာဘာသာအစီအစဉ် ရဲ. စနေနေ့တေးဂီတကဏ္ဍမှာ နောက်ဆုံးအပါတ်စနေနေ့ကလွဲရင် အပါတ်တိုင်း ဂျပန်သီချင်းလေးတွေလွှင့်ပေးနေတယ်။
အခုအချိန်အထိ ဂျပန်သီချင်းလေးတွေကို အင်တာနက်မှာလွှင့်ခွင့်မရှိလို့ သီချင်းနေရာတွေကို ဖြတ်ပြီးမှ အင်တာနက်မှာတင်ရတာ။ အဲဒိတော့ တေးဂီတအစီအစဉ်ဆိုပြီး သီချင်းမပါတော့ ဆားမပါတဲ့ဟင်း ဆိုတာထက် အသားမပါတဲ့ ကြက်သားဟင်း လိုဖြစ်နေတာပေါ့။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ကစပြီး ဂျပန်သီချင်းတွေကို အင်တာနက်ပေါ်ကနေနားထောင်လို့ရပြီ။
သီချင်းတွေရဲ. အဓိပါယ်အကျဉ်းချုံးကို သီချင်းထဲမှာဘာသာပြန်ပေးတယ်။
သောတရှင်တွေပို့လာတဲ့ တေးတောင်းလွှာ တွေကိုလည်း ထည့်ထားတယ်။
အန်အိတ်ခ်ျကေ မြန်မာဘာသာဌာနကို စာနဲ့ရေးပို့လို့လည်းရတယ်။
Japan Brocastin Corporation
Email ---> nhkworld@nhk.jp
ဂျပန် တော့ပ်တန်း သီချင်း ၂ပုဒ်
ဂျပန်တော့ပ်တန်း သီချင်း ၂ပုဒ် + သံစဉ်များရဲ.အဓိပ္ပါယ်
သီချင်းထဲကဂျပန်စကား (စာမေးပွဲ + ရှေ.လကအဖြေမှန်သူနဲ့ကံထူးသူကြေငြာ)
သီချင်းထဲကဂျပန်စကားဆိုတာ သီချင်းစာသားထဲကဂျပန်စကားအသုံးအနှုံးတွေကိုသင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးပါ။ Chorus အပိုဒ်ကို နှစ်ပါတ်ခွဲပြီး သင်ပေးတယ်။ ဂျပန်စာသားကိုရည်မွန် က ဆိုပြတယ်။ မသန်းသန်းခင်က အဓိပ္ပါယ်တွေကို မြန်မာလိုပြန်ပေးတယ်။ တတိယပါတ်မှာ စာမေးပွဲစစ်တယ်။ စာမေးပွဲပုံစံကတော့၊ ရည်မွန်က ဂျပန်လိုဆိုပြလိုက်တဲ့အပိုဒ်ရဲ. မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်ကိုရေးပြီး အန်အိတ်ခ်ျကေကိုပို့ပေးရတယ်။ အဖြေမှန်တဲ့သူတွေထဲက လတိုင်းလတိုင်း ကံထူးရှင် ၆ ယောက်ကိုရွေးပြီး အန်အိတ်ခ်ျကေကနေ လက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးတယ်။ အဖြေပေးပို့တဲ့သူတိုင်းကို (သီချင်းထဲကဂျပန်စကားစာစောင်) လေးတွေနဲ့ ဂျပန်စာလက်ရေးလှလေ့ကျင့်ဖို့ စာရွက်လေးတွေပို့ပေးတယ်။ သီချင်းထဲကဂျပန်စကားစာစောင် ဆိုတာကတော့၊ ဂျပန်လိုစာသား၊ မြန်မာလိုအသံထွက်၊ မြန်မာလိုအဓိပါယ် တွေနဲ့ သောတရှင်တွေအတွက်ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ.ဓါတ်ပုံနဲ့ နှုတ်ဆက်စကားလေးတွေပါတဲ့စာစောင်လေးပေါ့။ အဖြေမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ စာစောင်လေးတွေပို့ပေးနေပါတယ်။ သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်း၊ ဂျပန်စကားကိုလေ့လာလို့ရတာပေါ့။
တေးဂီတအစီအစဉ်အပြင်၊ သတင်း နဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
NHK Radio Japan Burmese ↓